SAUDI ARABIA oo shuruud adag ku xirtay soo celinta xiriirka maamulka ISRAEL - Caasimada Online
Home Dunida SAUDI ARABIA oo shuruud adag ku xirtay soo celinta xiriirka maamulka ISRAEL
Riyadh (Caasimadda Online) – Wasiirka arrimaha dibedda ee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in heshiiska suurta-galka ah ee soo celinta cilaaqaadka Israe uu ku xiran yahay horumarka geeddi-socodka nabadda Falastiin.
Amiir Faisal bin Farhan oo maanta la hadlay warbaahinta CNN, ayaa sheegay in xiriirka Israel oo caadi laga dhigo ay keeni karto faa’iido baaxad leh oo gobolka guud ah.
“Waxay aad u caawin laheyd gobolka, dhaqaale ahaan, bulsho ahaan iyo dhanka amniga,” ayuu ku yiri wareysiga uu siiyay CNN, isaga oo intaa raaciyey inay macquul noqon karto heshiiska haddii la helo dowlad Falastiin ah oo dhulkeeda uu ku saleysan yahay xuduudihii 1967, ka hor dagaalkii Israel iyo Carabta.
“Sacuudi Carabiya waxey doonayaan in Falastiin ay noqoto dal madax bannaan sidii aan kal hor sheegnay,” ayuu yiri Amiir Faisal bin Farhan.
“Waxa aan u baahanahay inaan ka dhabeyno waa heshiis nabadeed oo horseedaya dowlad Falastiin sharaf leh iyo madaxbannaanida lagu shaqeyn karo oo Falastiiniyiinta ay aqbali karaan,” ayuu yiri.